Saripika 8 maneho ny hakanton’ny natiora ao Amerika Afovoany sy Pero · Global Voices teny Malagasy
'Amin'ny maha-biôlôjista, nalaiko ny fankantsary handraketana ny hamaroam-piainana manodidina ahy'
Voadika ny 23 Mey 2022 4:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Nederlands, Italiano, नेपाली, Română , عربي, Español
Sary natolotr'i Daniel Núñez tam-pitiavana.
Ho fankalazàna ny Andro Erantany ho an'ny Fahasamihafàna Biôlôjika, zaraiko aminareo ny saripikan'ireo bibidia ankafiziko indrindra avy ao Goatemalà sy Pero. Amin'ny maha-bôlôjista ahy, lasa toy ny tanàko havana ny fakàna sary, satria ny saripika dia afaka mampifameno ny siansa sy ny fiarovana. Sary iray dia afaka manampy hakàna sary an-tsaina ny zavatra atao ao anatina fikarohana, afaka ampahafantarana ireo karazana izay tsy mba omena lanja be, ary hiraketana ireo karazana vaovao sy ny fitondrantena (fihetsika) vaovao, ohatra.
Taona dimy lasa izay, noraisiko ny fakàntsary dia nanomboka nanapika sary ny hamaroam-piainana izay nojereko nandritra ny fotoana nifandimby aho. Fony aho nianatra ny biôlôjia tao amin'ny Universidad del Valle de Guatemala no nifoha ny tena fahalianako sy fitiavako maka sary. Noho ireo biby rehetra narahako maso, tsy tapaka aho ny nandeha teny an-kianja rehefa nanapaka hevitra ny hanokan-tena amin'ny fakàna sary.
Ireo biby mandady sy miaina anaty rano no voalohany tamin'ny nahaliana ahy, azo ambara ho ireo biby notsaratsarain'ny olona maro fahatany, sangy tsikelikely aho dia nanomboka niditra tamin'ny fakàna sary ireo fiainam-biby anaty natiora, toy ny vorona sy ireo biby mampinono. Indreto ny sasany amin'ireo saripika ankafiziko, arahana famaritana fohy.
Amiko, ny Quetzal Marevaka (Pharomachrus mocinno), vorona iray hita indrindra ao Meksika, Goatemalà, Honduras, ary Costa Rica, no iray amin'ireo vorona faran'izay mahatlanjona indrindra eto ambonin'ny tany. Mba hahazoana ity saripika ity, nandany andro marobe aho niandry sy nanara-maso ny fihetsik'ireo quetzals tao amin'ny akanin'izy ireo. Taorian'ny fiandràsana efa ho ora enina mahery tao anatin'ny alan'i Atitlán volcano, Sololá, ao Goatemalà, hitako ny lahy mivatsy sakafo ho an'ireo zanany, ary dia nopihako io fotoana io.
Indray tolakandro nanorana tao amin'ny Renirano Tambopata ao amin'ny Valanjavahoary Nasiônaly ao Tambopata, Pero. Nitady biby mpihaza izahay tao amin'ilay renirano, indrindra fa jagoara (jaguars) sy pumas. Indrisy anefa, tsy nahita izahay, fa nahavita kosa nanaramaso iray tamin'ireo karazam-biby fihinan'ny jaguar … ny capybara (Hydrochoerus hydrochaeris). Fianakaviana capybaras iray teo amin'ny renirano; teny anelanelan'ireo pitik'orana, hitanay ity reny ity sy ny zanany kely.
Ity saripka ity dia mampiseho ny firaisana ataon'ny sahona mainty maso ao Goatemalà (Agalychnis moreletii). Nandritry ny alina dia vitanay ny nanara-maso ny fitondrantena ara-pananahan'ireo lahy sy vavy teo akaikin'ny rano nihandrona iray. Dobo kely nataon'olombelona io rano nihandrona io, ka ao ireo karazany toa io lazaina io no manararaotra ireo loharano mba hanaovany firaisana sy hanatodizany. Ao Belize, El Salvador, Goatemalà, Honduras, ary Meksika no hita io karazany io.
Mety hoe karazany efa mahazatra ity, nefa rehefa sambany nanara-maso azy ity aho, dia tena fahatsapana iray nahafinaritra mihitsy. Misy karazana sahona fitaratra marobe ao anatin'ny fianakaviamben'ny Centrolenidae, fa ny Hyalinobatrachium viridissimum no hany karazana avy any Goatemalà. Tena mahavariana izany hoe fahafahana mahita ny taova rehetra ao anatiny amin'ny antsipirihany izany.
Iray amin'ireo saripika tena ankafiziko, vitako ny naka sary karazany telo amin'ireo macaws teo am-pihinanana tanimanga tao Collpa de Chunco tao amin'ny Tahirin-javaboary Tambopata, Pero. Tamin'ny andro voalohany nanaovana fanarahamaso, nosakanan'ny orana aho tsy ho afaka hahita na singam-borona iray aza teo amin'ilay rindrina, fa ny andro taorian'io dia fampisehoana sidina nataona vorona maherin'ny 30-40 isa no hita, misakafo eny ambony hazo. Eo anatin'ilay saripika, ny karazany Ara macao (macaw mavo manopy mena), Ara ararauna ( macaw manga sy mavo), ary ny Ara chloropterus (macaw mena sy maitso) no hitanao.
Iray amin'ireo bibilava tsara indrindra ao Goatemalà ny Palm Viper (Bothriechis bicolor) mampitolagaga. Ity no isan'ireo bibilava voalohany azoko sary ary noho io antony io, lasa iray amin'ireo saripika ankafiziko izy ity.
Iray amin'ireo fihaonana tsy nampoizina indrindra sy sarotra tadiavina hitako hatrizao. Fandehandehanana tany an-tendrombohtra no niandohany, tamin'ny 10 ora maraina, mba hanara-maso karazany hafa. Taorian'ny nibabena nandritry ny andro tontolo izao fitaovana sy tsy nahitàna na inona na inona, fihaonana iray tamin'ny 10 ora alina no nampamirapiratra ny alinay. Ilay bibilava misy volomaso (Bothriechis schlegelii) angamba dia efa mahazatra any amin'ireo firenena toa an'i Costa Rica, saingy ao Goatemalà dia any amin'ireo faritra vitsivitsy ihany no ahitàna azy io, amin'ny tehezan'i Karaiba.
Farany, iray amin'ireo biby tsy mampino indrindra vitako narahana maso. Ny Ranitomeya fantastica dia karazany iray tsy fahita raha tsy ao amin'ny faritra San Martin sy Loreto ao Pero, midika fa ao amin'io faritra io ihany no ahitàna azy ireo. Satria karazany mila toeram-ponenana miavaka mihitsy, ny fahasimbàn'ny toeram-ponenany sy ny zavatra ataon'olombelona dia mahatonga azy ireo ho tandindonin-doza. Eto isika dia afaka mahita ny lahiny miaraka amin'ireo tsibobokany eo an-damosiny, izay toetra iray an'ireto karazany ireto .
Tsidiho ny kaontiko Instagram sy Twitter hahitànao misimisy kokoa ny asako.